FITANTANANA NY KAOMININA : “Tokony hampahafantarina ny vahoaka ny tena asan’ny Ben’ny tanàna”
Tsy ho ela dia hiatrika fifidianana ben’ny tanàna indray ny vahoaka Malagasy. Efa amperiny avokoa ny fanomanana rehetra amin’ny fiatrehana izany. 12 juillet 2019
Manoloana ireo fifidianana roa nifandimby dia nilaza ny hanarina ireo lesoka rehetra ny mpikarakara. Raha ho an’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo dia nanaitra ny maro ny tsy fahazotoan’ny olona nandray anjara tamin’ny fifidianana. Heverina ho anisan’ny antony nahatonga izany ny tsy fahalalan’ny olona akory ny asa hosahanin’izany solombavambahoaka izany aorian’ny fahalaniany. Manoloana izany dia nanolotra soso-kevitra ny fiarahamonim-pirenena iray ny amin’ny tokony hampahafantarana amin’ny vahoaka izay tena asa hiandraiketan’izany ben’ny tanàna izany, miaraka amin’ireo mpanolotsainy.
Rehefa fantatry ny vahoaka izany, hoy ny voalaza dia manapa-kevitra izy amin’izay olona heverina fa mendrika hofidiana. Raha ny zava-misy anefa hatreto dia mbola tsy misy ireo manazava ka mampahafantatra ny olom-pirenena ny asan’ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Ankilany, ireo kandidà ihany koa tokony hahafantatra ny asa miandry azy raha toa ka lany fa tsy milatsaka an-jambany fotsiny ihany. Nomarihin’ity fiarahamonim-pirenena ity fa heverina ho famitaham-bahoaka ny tsy fampahafantarana amin’ny vahoaka ny tetik’asa mazavan’ilay kandidà. “Amin’ny fifidianana dia zavatra maro no mila jerena.
Misy ny fanararaotana ataon’ireo mpanao politika amin’ny vahoaka Malagasy izay tsy maharaka ny vaovao. Amin’ny peta-drindrina, ohatra, dia ny sarin’ilay kandidà fotsiny no mipetraka eo. Inona anefa izay sary ? Tokony hisy ny fanazavana feno momba azy sy ny fandaharanasany », hoy ny fanazavana. Mba hanarenana ireo lesoka bevava dia tokony hatao laharam-pahamehana ny fanentanana ireo mpifidy amin’ny fifidianana ho avy.